Air New Zealand waxay qaadataa geyntii ugu horreysay ee A321neo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air New Zealand waxay qaadataa geyntii ugu horreysay ee A321neo
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka
Air New Zealand ayaa noqotay howl wadeen cusub oo ka tirsan A321neo, kadib markii la keenay diyaaradiisii ​​ugu horeysay usbuucaan. Isku soo wada duuboo, Air New Zealand waxay heli doontaa 20 A320neo oo ah diyaarad reero ah.
Air New Zealand A321neo-kii ugu horreeyay ayaa lagu rinjiyeeyay sumadda shirkadda oo dhan livery madow. Diyaaradda waxaa ku shaqeeya matoorada Pratt & Whitney Pure Power waxayna qaabishaa 214 rakaab ah oo isugu jira qaab fasal oo raaxo leh.
Waxaa loo xushay waxqabadkeeda hawlkarnimo, raaxeysiga iyo baaxada ay leedahay, raxanada Air New Zealand ee A320neo dayuuradaha ayaa marka hore ku dari doonta awooda xamuulka trans-Tasman iyo marinada Jasiiradaha Baasifigga iyo marxaladda dambe ee adeegyada gudaha.
Air New Zealand waa hawl wade muhiim ah oo ka tirsan A320 Qoyska, wadar ahaan 30 A320ceo oo hadda ku shaqeynaya waddooyinkeeda, trans-Tasman iyo Pacific Islands.
A320neo Family waxay ka kooban tahay qolka keliya ee ugu weyn samada, A15neo Family waxay ku daraysaa tiknoolajiyaddii ugu dambeysay, oo ay ku jiraan matoorrada jiilka cusub iyo Sharklets, oo marka la isku daro gaarsiiya boqolkiiba 6,100 shidaalka. In kabadan 100 amar oo laga helay in kabadan 320 macaamiil ah, qoyska A60neo wuxuu qabsaday ku dhawaad ​​boqolkiiba XNUMX boqolkiiba suuqa.